July Dream: Interview by The Voice
me: Hi မနေ့က ပြောနေရင်းနဲ့ offline ဖြစ်သွားတယ်နော်။
MHA: ဟုတ်... အင်တာနက်ကော်နက်ရှင် မကောင်းတာပါ။
me: အင်တာဗျူးက ဘယ်လိုအကြောင်းအရာကို ဗျူးမှာလဲ ခင်ဗျ။
MHA: ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပါပဲ။ နှစ်သစ်ကူး ရင်ခုန်သံ သဘောပေါ့။
me: ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲ ခင်ဗျ။ အမြည်းအစမ်းလေး ပြောပြပါလား။
MHA: ဟုတ်။ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ကျရင် ဘာလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲရှင့်။
me: ~ နှစ်ချုပ် အလုပ်လေးတွေ လုပ်ရင်း Marina Bay မှာ ကျင်းပမယ့် New Year Count Down ကို တိုက်ရိုက်လွှင့်မယ့် Channel -5ကို ထိုင်ကြည့်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဟိုမှာ သွားကြည့်တာက လူများပြီး အကုန်မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ကနေ ကြည့်ရင်တော့ အကုန်မြင်ရမှာလေ။
MHA: ဟုတ်။ တချို့တွေက ပြောကြတယ် ဒီ New year က မြန်မာတွေနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့လေ။ သင်္ကြန် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှ မြန်မာတွေနဲ့ ဆိုင်တာ။ အဲဒါကို ရောယောင် ပျော်နေကြတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုဂျူလိုင့်အမြင်ကို သိချင်ပါတယ်။
me: မြန်မာပြည်သားတွေက ပွဲလမ်းသဘင်ကို ခုံမင်တတ်ကြပါတယ်။ ၁၂ လ ရာသီပွဲတွေကိုပဲ ကြည့်ပါတော့။ ကိုယ့်ရိုးရာ ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆင်နွှဲကြသလို တခြားပွဲလမ်းသဘင်ကိုလည်း အလွတ် မပေးလိုတာ သဘာဝကျပါတယ်။ ခရစ်စမတ်တို့ New Year တို့ဆိုတာ တကမ္ဘာလုံးမှာ ကျင်းပတဲ့ ပွဲပဲလေ။ အဲဒီလိုပွဲမျိုးကို ဆင်နွှဲတာ မသင့်တော်ဘူးလို့ မမြင်မိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မသင့်တော်တဲ့ သရုပ်ပျက် ဆင်နွှဲမှုမျိုး၊ မူးယစ်ရမ်းကား ဆူပူနှောင့်ယှက်တာမျိုးတော့ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ ကိုယ့်စည်း ကိုယ့်ကမ်းလေးနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆင်နွှဲသင့်ပါတယ်။
MHA: တချို့တွေ(လူငယ်)က new year မှာ အပျော်လွန်ကြတာမျိုးရှိတယ်။ ပြောချင်တာက ကောင်လေးတွေ၊ ကောင်မလေးတွေ အရက်တွေသောက် မူးကြတာမျိုး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညသန်းခေါင် အနှောင့်အယှက် ပေးသလို ဖြစ်တာမျိုး အဲလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုကော ကိုဂျူလိုင် ကြုံဖူးပါလား။ အမြင် သိချင်ပါတယ်။
me: လူငယ်တွေ အပျော်ကြူးတာ မြင်ဖူးပါတယ်။ ကြုံဖူးတာလေးက... လမ်းထဲမှာ အဖေက ခရီးသွားနေတယ်။ အမေက မရှိတော့ဘူး။ အမဖြစ်တဲ့သူက သူ့ ယောကျာ်းလေး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မူးရူးနေတဲ့အချိန် သူရဲ့ ၁၀ နှစ်အောက် မောင်လေးနဲ့ ညီမလေးက လမ်းပေါ်မှာ ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေလို့ ကလေးတွေနဲ့ အဖော်လုပ်ပြီး နေခဲ့ဖူးတယ်။ နှစ်သစ်ကူးပွဲကို အကြောင်းပြပြီး စည်းလွတ်ဝါးလွတ် သောက်စားမူးရူးတာကတော့ မကောင်းဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။
MHA: နှစ်သစ်ကူးနေ့မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရော ပြန်သုံးသပ်မိတာ ရှိပါလား။ အရင် နှစ်ဟောင်းတုန်းက ငါဘယ်လိုမျိုး လုပ်ခဲ့တယ်။ နှစ်သစ်မှာ ဘယ်လိုတွေ လုပ်မယ် ဆိုတာမျိုးကို ဆိုလိုချင်တာပါ။
me: New year resolution တွေကတော့ Blog မှာ ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့ လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ လာမယ့်နှစ်မှာ ဘာတွေ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာတော့ စိတ်ထဲမှာပဲ ရေးပါတယ်။ အပြင်ကိုတော့ ချမပြတော့ပါဘူး။ ဘာလုပ်မယ် ညာလုပ်မယ် ဆိုတာမျိုး ပြောပြမိရင် တချို့တွေက လေကြီးတယ်လို့ ကြွားတယ်လို့ မြင်တတ်ကြပါတယ်။ အသံကြောင့် ဖား မသေရအောင်... လုပ်မယ့်အရာတွေကို စိတ်ထဲမှာပဲ ထားလိုက်ပါတယ်။
MHA: ဒီနှစ်၂၀၁၀ ဟာ တခြားကုန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ဟောင်းတွေနဲ့စာရင် နည်းနည်း ထူးခြားတယ်ပေါ့။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတာတို့၊ မုန်တိုင်းတိုက်တာ၊ ရေရှားပါးတာတို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မဟုတ်ဘဲ ဒီနှစ်ဟောင်း(၂၀၁၀)ကို ကိုဂျူလိုင့်အနေနဲ့ ဘယ်လို သုံးသပ် ထင်မြင်မိပါသလဲ။
me: နှစ်တိုင်း နှစ်တိုင်းကတော့ ထူးခြားချက် ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ မုန်တိုင်းဝင်တာတို့ ရေရှားတာတို့ ဆိုတာကတော့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်ဆီး ယိုယွင်းမှုရဲ့ ရလဒ်ကို နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ခံစားရတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အချိန်မှီ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။ ဒီနှစ် ၂၀၁၀ မှာတော့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဖြစ်တယ်။ ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်သာ ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးရဲ့ အလှည့်အပြောင်း တစ်ခုအနေနဲ့ အကောင်းမြင်ချင်မိခဲ့တယ်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ ရှေ့ခရီးလမ်းကို ရိုးသားစွာနဲ့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပေါ့ဗျာ။
MHA: ပြီးတော့ နှစ်သစ်မှာကော ဘယ်လိုမျိုး ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စတွေ မျှော်လင့်မိပါသလဲ။ ကိုဂျူလိုင့်ဆန္ဒတွေကို သိချင်ပါတယ်ရှင့်။ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ပေါ့။ ပြီးတော့ ကိုယ့်အတွက်ကောပေါ့။
me: မြန်မာပြည်သားတွေ ဝါးလုံးခေါင်းထဲ လသာနေတဲ့ အမြင်တွေ ပြောင်းလဲသင့်ပါပြီ။ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် စိတ်ဓါတ်တွေ အရင်ပြင်ကြပါ။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို လက်ခံပါ။ ပြုပြင်သင့်တာတွေကို ပြုပြင်ပါ။ မကောင်းဘူးဆိုတာ သိရဲ့သားနဲ့ ရေလိုက်ငါးလိုက် လုပ်နေမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည် နစ်နာပါတယ်။ ဟိုတချိန်က ရွှေထီးဆောင်းခဲ့တာကို တမ်းတနေပြီး စိတ်ကူးတွေ ယဉ်နေရင်တော့ ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေးပါမယ်။ အဲဒီလို ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်အတွက် မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်တွေ မြင်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ နောက်ကျနေပြီ ဆိုပေမယ့် အခုချိန်ထိ မလိုက်လာသေးရင် အမြဲတမ်း ကျန်ရစ် ဖြစ်နေမှာ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့အတွက် ဆိုင်ရာအလုပ်တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ထကြ ရုန်းကြ နှိုးကြားကြပါလို့ ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။ သင်္ကြန်အမြောက် ဘဝကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ကြပါစေ...
MHA: နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဘာများ ထပ်ပြီးပြောချင်သေးလဲ။ နှစ်သစ်ကူးမှာ ပျော်ချင်တဲ့လူငယ်တွေ အတွက်ပေါ့။
me: လူငယ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ပါ။ ဒါကြောင့် ဘဝရည်မှန်းချက် ရှိကြပါ။ မျှော်လင့်ချက် ထားကြပါ။ ပျော်သင့်တဲ့အချိန် ပျော်ပါ။ အလုပ် လုပ်သင့်တဲ့အချိန် အားကြိုးမာန်တက် လုပ်ကြပါ။ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာ၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကို မဖျက်ဆီးပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဘဝခရီးလမ်းမှာ အတ္တဟိတနဲ့ ပရဟိတလည်း မျှစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကျိုး သူ့ကျိုး နှစ်ဘက်မျှအောင် လုပ်စေချင်ပါတယ်။ သူလည်း အကျိုးရှိ ကိုယ်လည်း အကျိုးရှိတော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။
MHA: အဖြေတွေက ကောင်းလိုက်တာ။ ကိုဂျူလိုင့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
me: ဟုတ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရင်ထဲ ရှိတာလေးတွေ ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ပေါ့။
The Voice Weekly Journal - Vol.7No 4, Jan 3-92011 Issue. ရဲ့ နှစ်သစ်ကူး ရင်ခုန်သံ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍမှာ ပါလာတဲ့ အင်တာဗျူးလေးပါ။ စာပေစိစစ်ရေးရဲ့ မူတွေကြောင့် အယ်ဒီတာ စားပွဲပေါ်မှာတင် ဆင်ဆာမိသွားတဲ့ စာသားတွေ ရှိတဲ့အတွက် ဂျာနယ်မှာတော့ ပြောခဲ့သမျှ မပါလိုက်ပါဘူး။ စာပေလောကရဲ့ အခက်အခဲတွေကို အထိုက်အလျောက် နားလည်မိတဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မမြင်မိပါဘူးဗျာ။
Posted by JulyDream at 11:14 AM
Good points you speak out.
Happy New Year.. July :)